Nagarik Shukrabar - जिब्रो सफा गर्न के गर्ने ?
जिब्रो सफा गर्न के गर्ने ?
बिहिबार, २८ पुष २०७३, ११ : ०० | शुक्रवार , Kathmandu
जिब्रोमा सेतो पत्र जम्मा भएमा जिब्रो फोहोर भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जिब्रो फोहोर भएमा श्वास गनाउने, स्वाद थाहा नहुने, शब्द राम्रोसँग उच्चारण नहुनेलगायत समस्या देखिन्छन् । घरमै पनि जिब्रो सफा गर्न सकिन्छः
बेसारमा पनि ब्याक्टेरियानाशक तŒव हुन्छ । त्यसैले जिब्रो सफा गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधा चम्चा बेसारमा कागतीको रस मिलाएर पेस्ट तयार पार्ने । यो पेस्ट केही बेर जिब्रोमा रगडेपछि कुल्ला गर्ने । साथै, आधा चम्चा बेसारलाई पानीमा घोलेर गार्गल गर्नाले पनि जिब्रो सफा हुन्छ ।